Xildhibaan Dhalxa “Dowladda Federaalka haka fiirsato dadka ay u direyso wada-haddalada Somalia iyo Somaliland” – Kalfadhi
Xildhibaan Prof Maxamed Cumar Dhalxa, oo kamid ah mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyada Soomaaliya oo ka hadlayay wada-hadalada Soomaaliya iyo Somaliland, ayaa sheegay in labada dhinac aysan wada-hadaladda u wajihin sidii loo baahnaa.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in dowladda Federaalka laga rabo in dadka ay u direyso wada-hadaladda Soomaaliya iyo Somaliland ay noqdaan dad laga fiirsaday.
“Odayaal dhamaqeyd Allah ha ka dhigo waa in lasoo celiyaa jawi caadi ah, maxaa yeelay waxaan kala nahay qof careysan iyo qof loo careysanyahay. Annaga wey noo careysanyihiin, sidaa awgeed haddii walaalkaa uu kuu careysanyahay, adiga waxaa lagaaga baahanyahay in aad dejiso, markaasi kaddib, ayaad la hadli kartaa”, ayuu yiri xildhibaanka.
Xildhibaan Dhalxa ayaa carabka ku adkeeyay “Ficiladda anniga iga imaanaya haddii ay kaa careysiinayaan xal lama gaari karo”.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay in Soomaaliya iyo Soomaaliland aysan aheyn dad is neceb balse ay jiraan dad ka shaqeynaya naceyb-kooda.
Shirka Golaha wasiirrada ee Somaliland
Golaha wasiirrada ee Somaliland ayaa horraantii bishii Sept ee sannadkan hoosta ka xarriiqeen in dib loo billaabo wadahadallada, waxaana lagu xiray shuruudo dhowr ah.